အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်စီးရီးပေးသွင်း - AASraw အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
ကျနော်တို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်၌ရှိသမျှသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူ 98% ထက်မနည်းရှိပါတယ်, အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်ပေးသွင်းများမှာရောင်းရန်အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်။
ဆေးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ကျန်းမာသောစားသောက်မှုအလေ့အထများကိုအစားထိုးမရကြဘူး။ လေ့လာရေးတစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ program နဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာအလေးချိန်-အရှုံးဆေးဝါးများအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သောပြသပါ။ သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည်ဟုအလေးခြိနျစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မေးကြည့်ပါ။
စားနှင့်ကာယလှုပ်ရှားမှုအလေ့အထအပါအဝင်အပြုအမူမှစသောအပြောင်းအလဲနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ, ဆေးညွှန်းဆေးတချို့လူတွေကကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ပျှမ်းမျှတွင်တစ်ဦးလူနေမှုပုံစံစတဲ့အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ညွှန်းဆေးဝါးများယူသူတွေကိုဆေးဝါးမယူကြဘူးသူတစ်ဦးလူနေမှုပုံစံစတဲ့အစီအစဉ်တွင်လူပေါင်းထက်သူတို့ရဲ့စတင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ရာခိုင်နှုန်းပို3နှင့်9အကြားဆုံးရှုံးရ။ သုတေသနညွှန်းအလေးချိန်-အရှုံးဆေးဝါးများယူပြီးတချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့စတင် weight.10 ရလဒ်များ၏ 1 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမဆုံးရှုံးကြောင်းဆေးဝါးနှင့်လူတစ်ဦးအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပြသထားတယ်။
သင့်စတင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ရာခိုင်နှုန်းကို5မှ 10 ၏အလေးချိန်အရှုံးသွေးသကြားဓာတ်, သွေးဖိအားများနှင့် triglyceride လျှော့ချခြင်းဖြင့်သင်၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးထိုကဲ့သို့သောပူးတွဲနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်အဖြစ်အဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချို့သောအခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများ, တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အများစုကကိုယ်အလေးချိန်ဆေး စတင်. ၏ပထမဦးဆုံး6လအတွင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေသောဆေးဝါးများအကြောင်းသိထားသင့်သည့်အချက်မှာ Orlistat အမှုန့်၊ ခါးသောလိမ္မော်၊ Synephrine အမှုန့်၊ Sibutramine အမှုန့်၊ Clenbuterol HCL အမှုန့်, ​​Phentermine အမှုန့်နှင့် Lorcaserin HCL အမှုန့်, ​​Cetilistat အမှုန့်။
1 ။ Orlistat အမှုန့်
Orlistat အမှုန့်နာမကိုမဟာမိတ်များအောက်မှာနှင့် Xenical အဖြစ်ညွှန်းအောက်မှာ over-the-counter ကိုရောင်းမယ့်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်မဟာမိတ်သို့မဟုတ် Xenical အဖြစ်လူသိများ Orlistat အမှုန့်, သငျသညျအစားအသောက်များတွင်ကနေစုပ်ယူအဆီပမာဏကိုလျှော့ချနှင့်သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအလွန်အမင်းမနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိပါတယ်အချို့သောအရာများစွာကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ, (မူးယစ်ဆေးဝါးများမပါဘဲ) တစ်ဦးအနိမ့် carb အစားအသောက်များတွင် orlistat အမှုန့်နှင့်ပေါင်းစပ်တဲ့အနိမ့်အဆီဓာတ်စာနှစ်မျိုးလုံးကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ ခါးသောလိမ္မော်ရောင် / Synephrine အမှုန့်
ခါးသောလိမ္မော်ရောင်ကိုခေါ်လိမ္မော်ရောင်တစ် type ကိုဝင်း synephrine အမှုန့်ပါရှိသည်။ Synephrine အမှုန့်အမျိုးမျိုးသောကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးဖော်မြူလာထဲမှာလူကြိုက်များပစ္စည်းဖြစ်ဖို့အသုံးပြုရသော ephedrine မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Synephrine အမှုန့်တစ်ဦးမျှမျှတတအစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်လျက်, တိုတောင်းသက်တမ်းအတွင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဖြစ်ကောင်းထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးနက်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီသာအစွန်းရောက်သတိနဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
3. Sibutramine အမှုန့်
Sibutramine အမှုန့်အလေးချိန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သောဦးနှောက်ထဲမှာဓာတုပစ္စည်းသက်ရောက်သည်။ Sibutramine အမှုန့်ဆီးချို, မြင့်သောလက်စထရော, ဒါမှမဟုတ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူအသုံးပြုသည်။
Sibutramine အမှုန့်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ sibutramine အမှုန့်ကိုယူပြီးနှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာစားသုံးခြင်း၏ပထမဦးဆုံး4ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအား4ပေါင်ဆုံးရှုံးသင့်ပါတယ်။ သငျသညျ4ရက်သတ္တပတ်များအတွက်ဆေးဝါးယူပြီးပြီးနောက်အနည်းဆုံး4ပေါင်မဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
4 ။ Clenbuterol HCL အမှုန့်
Clenbutrol HCL အမှုန့်သည်ဖြည့်တင်းသော Clenbuterol HCL အမှုန့်ကိုအဆီလောင်ကျွမ်းစေခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Clenbuterol ၏ HCL အမှုန့်ရလဒ်များသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးဂျက်စီကာဟာဒီနှင့်ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းအပါအဝင်နာမည်ကြီးများနှင့်အားကစားသမားများကထောက်ခံသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြေခံဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်စဉ်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဇီဝြဖစ်ပျက်စေသည့်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။
ပါရမီကိုယ်အလေးချိန် / အစားအသောက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအထူးသဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းစျေးဝယ်အသုံးပြုပုံအလွန်သတိထားရရန်လိုအပ်နေပါသည်။ လိမ်လည်သူများကိုအဖြစ်သက်သေပြခံရဖို့ပေမယ့်ပါရမီကုန်စည်များကိုမလုပ်ပဲသူနှစ်ဦးအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ AASraw ပေးသည်သာပါရမီကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးသည်။
အားလုံး 16 ရလဒ်များကိုဖေါ်ပြသည်